Nandany $ 113.9 miliara dolara tamin'ny fitsangatsanganana an-trano ny Hispanika tamin'ny taona 2019
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Nandany $ 113.9 miliara dolara tamin'ny fitsangatsanganana an-trano ny Hispanika tamin'ny taona 2019
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Karaiba • Cruising • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny toeran-toeran-tokana telo voalohany ho an'ireo mpandeha alina Hispanika dia California (21%), Texas (15%) ary Florida (14%). Mifanitsy amin'ireo fanjakana telo misy mponina Hispanika ambony indrindra io.
Ny ankamaroan'ny mpandeha Hispanika (85%) dia nitsidika ny firenena / faritany lovan'ny fianakaviany, miaraka amin'ny 15% miverina mihoatra ny indray mandeha isan-taona ary 22% miverina isan-taona.
Fito amby fitopolo isan-jato no nanaiky fa mety hitsidika toerana itodiana izy ireo izay mandray ny kolontsaina Hispanika ary mankalaza ny fandraisana anjaran'ny orinasa Hispanika sy ny kolontsaina.
Ny toeran-toeran-tokana telo voalohany ho an'ireo mpandeha alina Hispanika dia California (21%), Texas (15%) ary Florida (14%).
Navoaka androany ny fandalinana vaovao izay mamaritra ny filàna, ny ahiahy ary ny fihetsiky ny mpandeha Hispanika any Etazonia.
Ny tatitra "Vistas Latinas: fanadihadiana miavaka momba ny mpandeha amerikana avy amin'ny razambe Hispanika", izay midika hoe Latina ny anarany fomba fijery, no fikarohana voalohany momba ny fitsangatsanganana momba azy, izay mandinika ny fihetsika, ny hevitra ary ny fahatsapan'ny mpandeha avy amin'ny vondrona demografika haingana indrindra any Etazonia.
Vistas Latinas koa no fandinihana voalohany nanombanana ny fahefa-pandanian'ireo mpandeha Hispanika amerikana, nahita fa nandany $ 113.9 miliara tamin'ny fitsangatsanganana an-trano tamin'ny taona 2019 izy ireo ary nahitana 13% n'ny fitsangatsanganana an-trano rehetra tamin'io taona io.
Hispanika mpitsangatsangana sy solontena
Ny mponina Hispanika amerikana dia poti-kolontsaina manankarena kolontsaina manankarena, noho izany zava-dehibe ny manamarika fa ny manam-pahaizana momba ny dia dia nampiasa fomba vaovao hametrahana ny fanadihadiana mba hitaratra ny fizarana ny mponina Latino ao amin'ny Etazonia, ary toy izany dia manome fahitana azo ampiharina miorina amin'ny toerana onenan'ireo mpandeha Hispanika sy ny toerana mety hitondran'izy ireo azy ireo.
Amin'ireo nohadihadiana ho an'i Vistas Latinas - ny ankamaroany dia nilaza fa teraka tao amin'ny Etazonia (83%) ary maro an'isa no nanondro ny ray aman-drenin'izy ireo dia teraka tao Etazonia Ny antsasaky ny valiny dia nanondro ny fiaviany avy Meksika, raha ny ampahefatry ny valiny nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa avy Karaiba lova (Puerto Rico, Dominikana na Kioban).
Ny ankamaroany - 80% amin'ireo mpandeha Hispanika - dia aleony milaza azy ho Hispanika, fa ny 25% kosa dia Latino / Latina ary 3% no maniry ny teny latina (afaka mifidy fe-potoana iray tiana kokoa ny valinteny).
Roa amby dimampolo isan-jaton'ireo namaly no nilaza fa mety hitsidika toerana itodiana izy ireo raha mahita ny hispanika hisolo tena amin'ny dokam-barotra sy / na ny fitaovam-pivarotana.
Ny mpandeha Hispanika dia mazàna mandany ny karazana haino aman-jery amin'ny teny anglisy.